Uqaabilsanaha Midowga Africa Somalia oo la kulmay Madaxda Dalka+Sawiro – SBC
Uqaabilsanaha Midowga Africa Somalia oo la kulmay Madaxda Dalka+Sawiro
Ergeyga gaarka ah ee Modowga africa Ambassador Mahamat Saleh Annadif ayaa maanta kulan kula qaatay magaalada Mqudisho caasimada dalka Madaxweynaha Dalka iyo Raiisul wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya.
INta uu soconayay Kulanka uu Ambassador Annadif la qaatay Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Raiisul wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa diirada lagu saaray arimaha murugsan iyo dhibaatooyinka ka jira Magaalada Dekeda leh ee Kismayo .
Ambassador Mahamat Saleh Annadif ayaa kala hadlay Madaxda Soomaaliya Dariiqadaha loo qaadayo bad baadinta mushtamaca ku dhaqan magaalada Kismaayo ee ku aadan xaaladaha bin aadan nimo iyadoo ay ka kaashanayaan xafiisak howlgalka Qaramada midoobay ee Soomaaliya oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan Unsom.
Markii ay soo dhamaadeen kulamadaas waxaa warsaxaafadeed ka soo baxay Ambassador Mahamat Saleh Annadif waxaa lagu shaaciyay in kulamadii dhexmaray isaga iyo madaxda dalka siweyn laisula afgartay ka wadashaqeynta xaaladaha Kismaayo iyo sii wadista caawinta shacabka halista ugu jira xaaladaha bin aadan nimo ee kismaayo .
Waxaaa lagu shaaciyay sidoo kale warsaxaafadeedka in Amisom ay sii xoojineyso u gargaarka dadkii u badnaa rayidka ee ku waxyeeloobay dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada Kismaayo, maadaama howlgalka rasmiga ah ee ay Amisom u joogaan soomaaliya tahay caawinta dhinacyada Amaanka iyo arimaha bulshada Soomaalida.
Ciidamada Amisom waxay doorkooda ka qaadanayaan qorsha howleeddka ugu degsan Soomaaliya kaas oo ah sugida Amaanka sii wadista la shaqeynta dowlada Soomaaliyeed dhinacyada amaanka iyo caawinta umada SOomaaliyeed” ayaa ugu dambeyntii lagu yiri warsaxaafadeedka.